Nail Intulo, okwakhiwa ngalo la mabhodi Intulo, Intulo Abashayeli, Ground Intulo - Weifeng
Self Tapping Intulo
Okungesona isimiso Imikhiqizo
Ningbo Weiifeng Fastener Co., Ltd is Kutholwe ku Yuyao City okulula ukufinyelela. Kuthatha ihora nesigamu ukuze Ningbo edolobheni ngendlela okusezingeni eliphezulu ngenkathi 3 amahora Shanghai City. Inkampani yethu ezikhethekile hardware isibonelo amahange, ngezikulufo, amabhawodi, amantongomane kanye namathuluzi. Amalungu ethu abe nakho eziningi kangaka ezinhle wohlu kulo mkhakha ukuthi sinikela ngemikhiqizo nge high ngemali ephansi kanye yethu yesevisi ukucabangela. Ngaphandle yokukhiqiza, siphinde ekubhekaneni ukuqondisa ukungeniswa nokukhishelwa emazweni angaphandle business.Our imikhiqizo are of nhlobonhlobo hlobo, ngokuvumelana ne mazinga alandelayo: GB, Din, JIS futhi ANSI futhi singasiza ukwamukela oda ezinye esifakiwe njengoba izicelo zamakhasimende Siyajabula ukusungula evumayo eside wokubambisana maqondana umkhumbi ukuxoxisana namakhasimende ethu ngesisekelo ukulingana kanye nekuzuza.
Hex imshini Shona Self Drilling Izikulufu
Hex flange self imishini isikulufa nge Washer
isigaba sesethulo micro
pan nokubiyela ikhanda isikulufa self-u-
pan ekhanda Phillips isikulufa
ikhanda pan nezikulufi self-u-
Phillips drive isikulufa
Phillips ikhanda flat isikulufa self-u-
Ikheli: Engeza: 16 Floor, ZhongMu International Mansion, No.398 South NanLei Road, Yuyao, Zhejiang, China
Ucingo: 0086-574-2271 8666
Ifeksi: 0086-574-2271 3377